Akanakisa Kabineti Mugadziri uye Fekitori | Medo
MEDO Makabati Emazuva Ano
Makabati eMedhia anoratidza chimiro chemazuva ano nemutengo unodhura.
Kunzwisisa kunetsekana kwevashandisi vekupedzisira, MEDO makabati ezvitoro zveTV ane akasiyana maficha uye dhizaini zvido; uye MEDO mativi emabhodhi anopa chengetedzo yakakwana yemidziyo, sirivheri, uye magirazi. Uchishandisa iyo yepamusoro veneer uye simbi zvikamu, pamwe neepamberi yekugadzira maitiro uye yakasimba yemhando yekudzora maitiro, vese avo vanopa kune yako yakatarwa musika uye inonyanya kutengeswa inogona kugara ichikubatsira iwe neako marandi kukosha.
Maonero Matsva Eimba
Yedu Dhizaini Philosophy
ChiItaly minimalist art
Kusimbisa runako uku uchinyanya kutarisisa kunyaradzwa
Kusarudza premium yekutanga-nhete yeganda
Makaroni simbi makumbo anosanganisira mwenje mwenje uye runako
Yakakwana musanganiswa wenyaradzo, hunyanzvi uye kukosha!
"Minimalist" iri mukutenderera
Hupenyu hweMinimalistic, Minimalistic Space, Minimalistic Kuvaka ...
"Minimalist" inowanikwa mune akawanda uye akawanda maindasitiri uye mararamiro
MEDO minimalist fenicha inobvisa zvese zvisina basa mabasa uye zvekare zvigadzirwa zvigadzirwa, kuvaka yakasikwa, yakapusa uye inozorodza mamiriro.
Pfungwa dzako nemuviri wako zvinosununguka kusvika pazvose.
Marble Epamusoro Yemazuva Ano TV kabhineti
Yemazuva ano TV inomira nemarble ndiyo yazvino dhizaini. Iyo ine yakapusa asi yakashongedzwa dhizaini. Iko kushandiswa kwegumbo rendarira rakaputirwa neepamusoro-soro chigaro cheganda kunowedzera humwe hunyanzvi hwemazuva ano uye runako pakutaridzika kwese, uku uchiwedzera kusimba nekusimudzira zvikamu zvakakosha.
Living Kamuri Wooden TV Mira
Mitsetse yemakabati edivi yakachena uye yakashambidzika, ine runako rwekare. Yakasarudzika kuravira, inogona kuenzaniswa neazvino kana echinyakare fesheni fenicha. Ruoko-rwakakwenenzverwa rwakasimba rwehuni veneer runoratidza huchenjeri hweruzivo uye hunyanzvi. Izvo zvinhu zvinogadzirwa neFodya Veneer uye 304 Stainless Simbi Titanium Yakafukidzwa.
Stylish Leather TV Mira
Iyo TV kabati inoratidzirwa neyakawiriraniswa musanganiswa wemastaera akasiyana. Mitsara yemashure eakavhurwa emakabati inosangana nenzvimbo yekutenderera, makona akapoteredzwa uye makumbo matete, ichibvumira huni yakasimba nesimbi gobvu kugarisana zvakanaka.
Chigaro Leather Wooden TV Cabinet
TV inomira mune oak veneer kupera. Ine makumbo akakwirira esimbi ayo anoita kuti zvive nyore kuchenesa muhupenyu hwezuva nezuva. Mawiri mahure akavanzika anobatsira kuronga tambo dzeyunifomu yako yekuchengetedza nzvimbo yako yekugara kubva mune yakasviba. Seimwe yeakakosha mashandiro eterevhizheni, ine madhirowa maviri makuru ekuchengetedza nepo zvigadzirwa zvemhando yepamusoro kubva kune anozivikanwa mabhenji zvichishandiswa kuwedzera kushandiswa kweiyo TV unit.
Minimalist Kurutivi Kabineti / Console
MEDO Kurutivi Kabineti mune yakasarudzika dhizaini inokodzera mutambo weimba yekudyira. Iyo saizi yakakodzera, inokatyamadza yepamusoro-giredhi chimiro, pamwe neakakura mabasa ekuchengetedza inoita kuti ive yakakosha uye inoshanda muimba yekudyira.
Kurarama Kamuri Console Tafura
MEDO Console Tafura inoratidza kunaka kwehunyanzvi pamwe nekukonana kwezvinhu zvakasiyana uye mavara. Mafuremu acho akakwenenzverwa matambo esimbi; izvo zvikamu uye misoro yekabhini ndeye walnut kana oak solid solid; uye iwo mapaneru ari oak kana walnut veneer yepakati density density fiberboard. Musuwo wepakati wepakati fiberboard yakavhurika kunze, uye mukati mebhodhi rerutivi rakashongedzwa nehuni.
Yakasarudzika Rutivi Khabineti / Shoe Bhokisi
Inogona kushandiswa semaviri edivi kabhineti uye shangu bhokisi. Nesanganiswa yakakwana yehuni uye dehwe, inopa inozorodza maonero mumba mako kuimba yekutandarira kana yekupinda. Iyo inouya nemikova mina yakavhurika ichishandisa iyo inopesana nemuvara iyo inoita kuti ive yakatanhamara muunganidzwa. Yakakura yekuchengetedza zvakare inokwezva ficha, inokodzera chaizvo yako yakapusa mararamiro.
Yemazuva ano Luxury Dining Side Tafura
Tafura yeConsole chinhu chinoshanda chinokodzera kicheni uye yekudyira. Iyo yepakati inofungisisa yakawedzera nematanho maviri anotambanudza bhokisi rekuchengetedza, iyo dura repasi iguru yekuchengetedza. Iko kusanganiswa kusimba kunovandudza zvakakwana hupenyu hwako hwezuva nezuva. Zvakare, iine zvinhu zvechigaro chechigaro uye pamusoro pemabhura kana huni pamusoro, ichasimbisa hupenyu hwatenzi pane minimalist uye fashoni.
Yakasvibirira TV Mira | Kurarama Kamuri Yemazuva Ano Dhizaini TV Mira | Wooden TV Cabinet Dhizaini
Vatengi vanotsvaga tsika dzeTV vane zvimiro zvakasiyana uye dhizaini yekuda. Kunzwisisa kunetseka uku, MEDO inogadzira yakashongedzwa uye inogara yakasimba tsika dzeTV dzinomirira yako musika wekutengesa.
Tichishandisa zvigadzirwa zvemhando yepamusoro, zvigadzirwa zvechizvino-zvino, uye kugadzirwa kwehunyanzvi, tinoita tsika dzeTV dzinoenderana zvinoenderana nezvaunoda. MEDO 'inotengesa zvikuru TV zvimire zvinogona kugara zvichikubatsira iwe kuwedzera kukosha.
Living Kamuri TV Mira Series ndeimwe yemhando yepamusoro-yakatarwa yeTV inomira mumatanho eMEDO. Ndiyo imwe yeanodiwa pamusika. MEDO dhizaini inoipa iyo nyowani nyowani iyo inoshandiswa zvakanyanya mufenicha. Kusangana nezvinodiwa zvehukuru hwenzvimbo, inogona zvakare kuwedzera murefu nekugadzirisa iyo yepamusoro pani kuti iite yakareba kana ipfupi. Iyo inochinjika kune dzakasiyana nzvimbo.
Nyowani Dhizaini Imba Fenicha Chimiro | Kuchengetedza Simbi TV Mira | Yemazuva Ano Minimalist TV Cabinet
Chikamu chikuru chiri muVeneered MDF chikamu chinowedzera mamwe maitiro. Iyo base yakasimba kabhoni simbi saka inogona kuve yakasimba kwazvo uye panguva imwechete yakatsetseka.
Ine dhizaini yemazuva ano, inosanganisa kureruka uye inoshanda pamwe chete mushe. Uyezve, madhirowa makuru anopa yakakura nzvimbo yekuchengetera uye inoita kuti TV imire inoshanda. Iyo yakasimba danda & chigaro cheganda rine marble pamusoro inoita kuti ive yakasimba uye yakagadzikana mune chimiro chekuchengetedza uye kwenguva refu-nguva kushandiswa.
Tafura yekunyaradza pamusuwo ndiyo yekutanga fenicha mumba. Kunyangwe ichiwanzoshandiswa munzira yekupinda, MEDO tafura yematafura inogona kuiswa kune chero nzvimbo mumba uye inogadzikana isingaperi.
MEDO tafura yematafura inosanganisa iyo yakajeka dhizaini uye zvinoshandiswa. Nekushandisa iyo yepamberi muchina uye zvemhando yepamusoro zvinhu, iwe unogona kuve nechokwadi nezve mhando ye MEDO koni tafura.
Iyo dhizaini yakapusa uye yazvino inochinjika mune akawanda masitayera nenzvimbo. Inobatanidza huni nesimbi zvakanyatsonaka kuratidza kuratidzwa kwemazuva ano. Iyo yepamusoro inopa madiki mabhokisi ekuchengetedza zvinyorwa zvidiki zvinogona kubatsira kuronga yako yekupinda. Iyo base inouya mune yakakandwa nhema nhema simbi chubhu. Kunyangwe ichitaridzika kunge yakatetepa, yakasimba nekutenda kune yakanaka simbi mhando.
Yakakwira mhando Minimalist Console Tafura | Kurarama Kamuri Kuchengetera Wood makabati Furniture | Horoji Khabineti Fenicha
Ine dhizaini yemazuva ano, inosanganisa kureruka uye inoshanda pamwe chete mushe. Iyo yakasimba huni & chigaro cheganda rine marble kumusoro chigadziko chinosimbisa uye kugadzikana muchimiro saka zvakachengeteka kushandisa.
Yemazuva Ano Furniture TV Cabinet
Mufananidzo Tsanangudzo Saizi (L * W * H)
Mira yeTV 2880x1020x750mm
Style: Minimalism maitiro
Zvinhu: Simbi, Premium Chigaro Leather, Kunze Walnunt ukanyatsotarisisa
Pazasi Furemu Simbi Gumbo + Chigaro Cheganda
Mira yeTV 2170 * 420 * 680mm
Zvinhu: Kusvuta Veneer, 304 Stainless Simbi Titanium Yakafukidzwa
Pazasi Furemu Simbi Gumbo
Mira yeTV 2200 * 400 * 430mm
Zvinhu: Yakapendwa simbi furemu, inounzwa walnunt veneer, premium chigaro cheganda
Pazasi Furemu Iron Iron Gumbo
Mira yeTV 2030 * 415 * 490mm
Zvinhu: Premium chigaro reganda, nhema simbi, oak
Yemazuva Ano Samani Kurutivi Kabineti
Side Cabinet 1380 * 380 * 1500mm
Zvinhu: Dema simbi isina simbi, nhema uye chena oak, premium chigaro cheganda
Side Cabinet 1250 * 420 * 1390mm
Zvinhu: Premium chigaro cheganda, 304 simbi isina simbi titanium yakafukidzwa
Side Cabinet 900 * 400 * 1080mm
Zvinhu: Yakapendwa simbi furemu, premium chigaro cheganda, kupinza walnunt veneer
Side Cabinet 1200 * 400 * 890mm
Zvinhu: Simbi, Premium Chigaro Cheganda, Inotorwa Walnunt Veneer